Gbanyụọ nzipu ozi ime obodo na Postfix na iRedMail - Payette Forward - Geeks
iphone enweghị ike ịhụ fitbit
ihuenyo ojii iphone mana ọ ka na -aga
ekwentị na -akwụsị ma na -ejikọkwa na wifi
kedu ihe mere iphone m ji ekpo oke ọkụ
digitizer anaghị arụ ọrụ nke ọma mgbe edochiri ya
Disable Local Email Delivery With Postfix
Na-anwa iji gbanyụọ nnyefe ozi ime obodo na iRedMail na postfix na sava email gị, ma ị na-eti isi gị na mgbidi ahụ. Use na-eji sava emere n’ụlọ maka nnyefe email, mana igbe mbata dị na ihe nkesa nke abụọ. N'isiokwu a, m ga-ekerịta ihe m mụtara banyere ya esi gbanyụọ nnyefe ozi ịntanetị dị na Postfix ma na-amanye email niile maka ụfọdụ ngalaba ka ha gaa n'ihu site na adreesị MX kwesịrị ekwesị.
Achọrọ m ma chọọ ma chọọ ntanetị maka ozi a, na ime ihe n'eziokwu, echeghị m na ọ ga-arụ ọrụ maka nhazi gị. Ma dabere na oge m tinyere nyocha nsogbu a, ọbụlagodi dị ka onye ọrụ sava na-abụghị Linux, achọpụtara m na m gafere ihe m chọpụtara ma kpee ekpere ka ọ nyere aka belata nkụda mmụọ gị.
Ọ bụrụ na ị na-ahụ “onye ọrụ amaghị na tebụl igbe igbe igbe”, ị nọ ebe kwesịrị ekwesị. Ihu ọma, ịchọrọ postfix iji kwụsị ịnwa ịnyefe email na akaụntụ email na sava gị nke na-adịghị adị. Nke ahụ ọ bụ n'ezie oke karịa ịjụ?
Idozi Postfix Iji Gbanyụọ Obodo Email Nnyefe N'ihi na ngalaba
ozi olu agaghị egwu na iphone 6
Ihu ọma, ntọala nhazi ntọala niile postfix dị na main.cf, yabụ ị nwere ike mepee faịlụ ahụ site na ịpị iheAbiara m /etc/postfix/main.cf.
Chọọ makamebere_mailbox_domainsakara - kwuo ya site n'itinye # ya n'ihu. Nke ahụ ga-gbanyụọ nnyefe ozi email mpaghara kpamkpam. Nke a bụ nke m:
Na-esote, chọtarelay_domainsahịrị, ma kwado ihe ọ bụla dị na ngalaba aha nke adreesị email ndị igbe mbata mee Na-ebi na ihe nkesa email gị. M yiri nke a:
N'ikpeazụ, chọtatransport_mapsakara, ma kwado yahash: / wdg / postfix / njemn'ebe ọ bụla dị. Anyị ga-eme faịlụ ahụ na nzọụkwụ ọzọ. M yiri nke a:
transport_maps = hash: / wdg / postfix / iga, zighachi akwụkwọ nnọchiteanya: ldap: /etc/postfix/ldap/transport_maps_user.cf, zighachi akwụkwọ nnọchiteanya: ldap: /etc/postfix/ldap/transport_maps_domain.cf
Ugbu a, ihe niile fọdụrụ ime bụ ime njem ụgbọ mmiri na-ekwu 'Were ozi email niile na-abata na ngalaba a ma zipụ ya site na ihe nkesa MX a kama!'
kedu ihe ọ pụtara nrọ nke ekwensu
Ya mere, mepụta faịlụ site na ịpị ihevim / wdg / postfix / njem. Tinye akara maka ngalaba ọ bụla ịchọrọ iwepu nnyefe mpaghara maka dịka ihe atụ dị n'okpuru, na-etinye ihe nkesa MX n'ime brackets. Nke a bụ nke m:
Mgbe ahụ, mee ihe ọ bụla postmap mere na faịlụ ahụ site na ịpị ihepostmap / wdg / postfix / njem. Nke ahụ dị mkpa - aga m akọwa ihe kpatara ya, mana ejiri m n'aka na ọ bụ ụzọ karịrị gị isi. (Amachaghị m ihe ọ na-eme.)
Atọ: Ọ bụrụ na ịmabeghị ihe ziri ezi MX sava bụ maka ngalaba enyere, ị nwere ike iji iwu groovy a chọpụta ihe ọ bụ - Echere m na ị ga-egwu ya n'ezie, mmadụ.
Ọzọ, Malitegharịa ekwentị postfix site na ịpị iheọrụ postfix Malitegharịa ekwentị, kpee ekpere, ma gbalịa ọzọ. Ọ bụrụ na ọ rụọ ọrụ, zụrụ m Corvette. Ọ bụrụ na ọ bụghị, ka m mara na ihe ngalaba na anyị nwere ike na-arụ ọrụ ọnụ na-eme ka nke a dịtụ nghọta nduzi idozi nsogbu a.
Postfix Post Idozi
Maka ugbu a, nwee obi ekele na edozila nsogbu a: I mebiela nnyefe mpaghara na sava email mpaghara gị na-agba postfix ma ọ bụ iRedMail, ị na-ejikwa adreesị MX ziri ezi kama.